Yiwu-China: Suuqa-habeen, ganacsiga xoogan ee Soomaali iyo Ajnabi leh ee ka socda (Warbixin) – Radio Muqdisho
Yiwu-China: Suuqa-habeen, ganacsiga xoogan ee Soomaali iyo Ajnabi leh ee ka socda (Warbixin)
Yiwu waa magaalo yar oo ku taalo bartamaha Gobalka, Zhejiang oo dhaca beriga dalka Shinaha, balse waa suuqa uga weyn ganacsiga jumladda badeecooyinka guud ee dunida.
Magaalada ayaa ka ganacsada, una soo dukaamaysi taga ganacsato badan oo ka kale yimid daafaha dunida, waxana ka mida Soomaali oo qaarkood kuwaba nool, xarumo ganacsi iyo xafiisyaba ku leh iyo kuwa igu soo dukaamaysi tago dalka, deriska iyo dibbadiisa.
Kala sareynta darajooyinka ciidanka – Waa kee Jananka ugu darajada sareeya ciidamada Qaranka?
Qormo: Jowhar maxaan ku soo arkay?
Wariyaha SONNA, Maxamed Cisma/an oo safar shaqo ku maraya gobalkaaas ayaa booqday magaalada, wuxuuna la kulmay Soomaali, Muslimiin Carab, Aasiya, Afrika iyo Ajnabikale oo badan.
“Waxkasta oo aad ku fekerto, waad ka helaysaa Yiwu” waa hal-hayska magaalada, waa sidaas oo magaalada waxa ka furan maqaaxi laga helayo cunto xalaal ah oo leh Shiinees, Turki, Masaari, Lubnaan iyo kuwa kale, waxaa sidoo kale ku yaalo hoteelo caalami ah iyo masaajiddo, waxaana intaa dheer suuq habeenkii kaliya shaqeeya, kaasi oo ku dhex-yaalo bartamaha magaalada waddo weyn oo dhex-marta sida uu ku soo waramaya wariyaha.
Suuqan-habeenkii ayuu shaqaynayaa, waxa uu u furan yahay ganacsatada Shiineeska ah oo waxa ay u dhaxeeyaan ganacsatada waa-weyn jumlada gadda iyo dadka macaamisha caadiga ah, dad kaskasta ha yeesheen, waxa ay gedayaan tafaariikh, inkasta oo jumlo ilaa in cayiman ay iibin karaan,wax-yaabaha layaabka leh waa in masaafo dhan hal KM oo laami ah laga bilaabo abaaro 6-dii maqribnimo ilaa 12-ka habeenimo laga dukaamaysanayo oo wax gaadiid la yiraahdo aan isticmaalaynin, mana loo maleeyo in maalintiina ay waddo tahay, habeena ay suuq tahay.
Waddadaas dhex-deeda, waxaa laga helayaa dhamaan wixii adeeg ah ee suuq looga baahnaa.
Ganacsatada Soomalida ayaa ii sheegay in ay ku farax-san yihiin ku ganacsiga, ku noolashaha iyo is-fahamka wax is-dhaafsiga iyo dadka Shiinaha magaalada ku dhaqan.
“Waxa aan imid magaaladan 2008-dii, waxa aan ku noolaa, oo aan ku ganacsanayey, tan iyo markaa, wax culeys ah oo aan ku qabo ma jiro, Soomaaliya iyo Kenyaba badeeco ganacsi baan gaynaa, halkan xafiis baan ku leenahay, luuqadda Shiinaha halkan baan ku bartay, weli waan bartaa, qoraalkeeda ayaa dhib ah”, Ganacsade Ismaciil Faarax ayaa u sheegay Wariyaha SONNA.
“Waa magaalo dhaqamo kala duwan leh, waxaana jira meelo caan ah oo dadka ajnabiga oo idil isugu yimaada, ma dareemaysid kalinimo oo meel kasta Soomaali baa ka helaysa, waa Soomaali-yarey”, ayuu raaciyey.
Wariyaha ayaa sidoo kale Suuqa kula kulmay Deeqo oo haweenay Soomaali ah, kana timid Canada kana dukamaysanayso Suuqa xilli barqa, 14-kii bishan October
“Haa walaal, waxaan ahay ganacsato ka timid Canada, go’yo baan halkan ka qaadayaa, waa suuq fiican inta badan isaga ayaan wax ka iibsadaa oo jaban, lagana fii’ido, sidoo kale waan tagaa Guangzhou”, Deeqo ayaa u sheegtay Wakaaladda SONNA.
Suuqan ayaa sidoo kale waxa laga helayaa badeecooyin Yurub iyo Aasiyan ay soo saareen, laguna iibiyo, waxana kamid caanaha, qalabka gaadiidka, Qamriga iyo IWM.
Badeecadaha qaar 90% Warshadaha soo saara ayaa toos looga keena, waxaana lagu iibinaya sicirka Warshadda, sidaas ayuuna qofka ganacsadaha ah ee iibsada uu toos u dhoofsanaya, iyada oo aan wax culeys kale ama canshuur la dul-saarin, balse marsiinayo nidaamka ganacsi ee u yaala magaalada, sida mas’uuliyiinta iyo ganacsatadaba u sheegeen SONNA.
Magaalada yar ee Yiwu, waxa ku nool 1.2 milyan oo dad ah oo ka mid ah 57-da milyan ee gobalka Zechejian guud ahaan ku nool, gobalkana wuxuu kamid yahay 10-ka gobal ee uga weyn 33-da gobal ee dalka Shiinaha.
Waa gobal horumar badan dhinaca teknoloojiyada, Waxbarashada, horumarka dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ka sameeyey, meelaha qaarna wuxuu ka horeeya magaalooyin badan oo ay caasimadda ku jirta sida uu wariyaha ku waramayo.
W/D: Maxamed Cismaan Cabdi “Black Cobra”
Dib u dhis lagu sameeyay qaar ka mid ah Waddooyinka Gaalkacyo “SAWIRRO”